Impimpi yenkohlakalo yokulawulwa kombuso yase-Nigeria ihudulelwa enkantolo | Scrolla Izindaba
Impimpi yenkohlakalo yokulawulwa kombuso yase-Nigeria ihudulelwa enkantolo
Sekuvele ividiyo ezinkundleni zokuxhumana ekhombisa ngesikhathi uShehu Mahdi, oyimpimpi yenkohlakalo yokulawulwa kombuso e-Nigeria, ngodlame ehudulelwa enkantolo ngamaphoyisa yize ebesesimeni esingesihle sempilo.
UMahdi, uphinde abe ngusomabhizinisi wase-Nigeria, usanda kuveza inkohlakalo okuthiwa yenziwa nguhulumeni wase-Katsina enyakatho ye-Nigeria kanye nokwehla kwamandla emali ekhokhelwe njengesihlengo kubathumbi kuhulumeni.
Ngokubika kwe-The Nation, lo oyimpimpi uboshwe kaningi futhi wahudulelwa okungenani ezinkantolo ezinhlanu ezahlukene ngamacala afanayo.
Mhla ziyi-16 kuNhlolanja, kubikwa ukuthi waboshwa kulandela ukucela izikhulu ukuthi ziphenye lokho ayekholelwa ukuthi ukusetshenziswa kabi kwezimali zomphakathi esifundazweni sase-Katsina.
Ubekwe amacala “okwehlisa isithunzi, ukukhwabanisa nokugqugquzela umphakathi ukuba ulwe nohulumeni wase-Katsina.”
Kule vidiyo, uMahdi ubonakala elele phansi enkantolo, ngenkathi amaphoyisa amabili amubambe izingalo zakhe. Ngokuthusayo, ugqoke izicathulo ezihlanganiswe ngensimbi yokuzivikela entanyeni nasokhalweni, yize kungaziwa ukuthi ukulimala kwamukelwe kanjani.
Ezabalaza, umemeza ngokumangazayo, “Lena yintando yeningi!”
Bephawula ngalesi simo esitatimendeni esisezinkundleni zokuxhumana, i-Amnesty International ikugxekile ukuboshwa nokuphathwa kabi kwempimpi.
“I-Amnesty International iyakugxeka ukuboshwa okungekho emthethweni nokuphathwa kabi kwempimpi uShehu Mahdi, obedalula izinsolo zenkohlakalo ezenziwa nguhulumeni wase-Katsina.
“Kusukela aboshwa mhla ziyi-16 kuNhlolanja, uShehu Mahdi wanqatshelwa ukufinyelela emndenini, abameli kanye nemithi yize isimo sakhe sempilo singesihle kahle. Sicela iziphathimandla ukuthi zimkhulule ngokushesha futhi zihloniphe amalungelo akhe. #Corruption #Katsina #Nigeria.”
Umthombo wevidiyo: @SaharaReporters